उर्जा वाच इतिहास: कसरी सानो व्यवसाय मालिकले आफ्नो ग्राहकहरूको अनुभव सफा गरी आफ्नो पसल उज्यालो पारी दिए।
तपाईं सान फ्रान्सिस्को खाडी क्षेत्र निवासी हुनुहुन्छ, वा मात्र शहर को एक मुट्ठी भरको भ्रमण गर्नुभयो, तपाईं प्रसिद्ध "उत्तरी बीच / सानो इटाली" छिमेकी अन्वेषण गरेको हुन सक्छ र क्यान्डी शप संग बाटोहरू पार गर्नुभयो। Z. Cioccolato (cioccolato) "चकलेट" को लागि इटालियन शब्द हो). स्टोरफ्रन्ट गाह्रो छ यसको चम्किलो, चंचल, शोकेस विन्डो र एक व्यक्तित्व मेल गर्न। भर्खरै पप गरिएको कारमेल मकको मादक पदार्थको सुगन्ध फुटपाथ भरिन्छ, यात्रीहरू बाध्य भएर भित्र आउँछन् र वरिपरि हेर्नुहोस्।
भित्र पस्दा, तपाईंले आफूलाई प्रशस्त ब्यारेलहरूले जीवन्त नुनको पानीको टाफी, पुरानो पुरानो विन्टेज क्यान्डी, आकर्षक बचपनका खेलौना, र यति धेरैको साथ अभिभूत महसुस गर्नुभयो। तर त्यहाँ एक पवित्र ग्रिल छ जसले यस क्यान्डी पसललाई अरू कुनै भन्दा फरक बनाउँदछ - यहाँ Z. Cioccolato, यो सबै fudge बारेमा हो। प्रत्येक ग्राहक जुन ढोकाबाट हिँड्छ उसलाई unique० अद्वितीय, नियमित रूपमा घुमाइने स्वादहरूको एक प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ।
सनसनीको प्रत्येक विवरण Z. Cioccolato अनुभवलाई हालको र एकमात्र मालिक, माइक Zwiefelhofer, जो एक अविस्मरणीय ग्राहक अनुभव सिर्जना गरेर खुद्रा स्थान बृद्धि गर्न अभियानमा रहेको छ सावधानीपूर्वक संरक्षित छ।
माइक व्यवसाय मालिकहरूको लामो वंशबाट आउँदछ।
माइक को लागी, एक व्यापार चलाउन को क्षमता आफ्नो रगत मा चलाउँछ। माइकका महान हजुरबा हजुरआमाले १०० बर्ष भन्दा बढीको लागि उत्तरी क्यालिफोर्नियामा एउटा सानो डिपार्टमेन्ट स्टोर चेनको स्वामित्व पाउनुभयो र त्यसपछि उनले उनीहरूको पाइला पछ्याए: उनले १ 14 वर्षको उमेरमा बक्स केटिको रूपमा पहिलो काम शुरू गरे, फ्रिज दही पसलको मालिकसम्म काम गरे , र फर्निचर बिक्रीमा काम गरे उहाँ खरीदको अवसरमा पहिले Z.Cioccolato.
"त्यहाँ दुई प्रमुख चीजहरू थिए जुन मलाई यो पसलमा आकर्षित गर्‍यो: एउटा स्थान हो, यो एउटा अचम्मको स्थान हो ... तर मलाई यस व्यवसायमा आकर्षित गर्ने मुख्य कुरा भनेको फज हो ... फज बिना हामी केवल सामान्य क्यान्डी पसल हौं, तर फजको साथ, हामीसँग पुरस्कार विजेता, अद्वितीय, र फरक छ। त्यो हाम्रो हस्ताक्षर हो। ”
जब माइकले अब अवकाशप्राप्त मालिकहरूबाट चार बर्ष पहिले स्टोर किनेका थिए, उनी आफ्नो अनुभवको पराकाष्ठालाई परिक्षणमा राख्न उत्साहित थिए।
"मलाई चकलेटको बारेमा धेरै थाहा थिएन, तर मलाई मेरो फ्रिज दही पसलबाट मीठो मीठो बारेमा थाहा थियो र मलाई खुद्रा चीजहरूको बारेमा निश्चित कुरा पनि थाँहा छ। त्यसो भए, चकलेट भाग मैले गत years बर्षमा सिक्न सक्षम भएँ ... मेरो सबै अनुभव यहाँ पसलमा प्रयोग गर्नका लागि राखिएको छ। "
को एकमात्र मालिकको रूपमा Z.Cioccolato, माइकले पसलमा सबै फरक-फरक टोपी लगाउँछ। उसको अगाडि काम गर्न बिक्री स्टाफ छ र भान्छाकोठामा काम गर्न चकलेटियर छ, तर हरेक बीचमा काम गर्नु उसको दैनिक जिम्मेवारी हो। जब एक सानो व्यवसाय मालिक को जीवन मा एक दिन वर्णन गर्न सोधिन्छ, माइक एक छोटो क्षण को लागी जवाफ कसरी र सोच्न को लागी सोच:
"यो गाह्रो प्रश्न हो। त्यहाँ म धेरै कुरा गर्छु ... "
एक सानो व्यवसाय को एक मात्र मालिक को रूप जीवन यसको चुनौतीहरु संग आउँछ; यो कहिलेकाँही थकाउने र भारी हुन सक्छ। माइकको लगनशीलताको प्रमाणको रूपमा, आफ्नो पहिलो दुई वर्षमा इन-एन्ड-आउट सिक्ने Z.Cioccolato, उसले आफ्नो दोस्रो बिल तिर्ने र आर्थिक रूपमा स्थिर रहन फर्नीचर फर्नीचरको रूपमा दोस्रो काम गर्यो। त्यो युग लामो घण्टा दिनहरू, पछाडि फिर्ता भरिएको थियो। नमिल्दो परिस्थितिको बावजुद, चार बर्ष पछि, माइकले आफ्नो व्यवसायको लागि भविष्य निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्दछ।
एउटा सानो व्यवसाय मालिकको रूपमा, माइकले ध्यानपूर्वक आफ्नो व्यवसाय खर्च व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ।
हाम्रो कुराकानीको क्रममा, माइकले कठोर यथार्थताको बारेमा कुरा गर्यो कि साना व्यवसायहरूले प्राय: त्यति पैसा कमाउँदैनन्। पसलको उच्च लागतले नाफा बढाउन गाह्रो बनाउँछ। माइकले निरन्तर क्षेत्रहरूको खोजी गरिरहेको छ जहाँ उसले पैसा बचत गर्न सक्छ, तर ती अवसरहरू भने विरलै हुन्छन् जब यसले न्यूनतम रकम खर्च गर्छ पसल चलाउन।
एक दिन माइक अपरेट गरीरहेको थियो Z.Cioccolato, उनले १टीपी T टी (एमएएफ) बाट ऊर्जा वाच anण कार्यक्रम शुरू गर्दै कल प्राप्त गरे। को ऊर्जा वाच Programण कार्यक्रम साना व्यवसायहरु शून्य ब्याज, क्रेडिट निर्माण loansण $2,500 सम्म ऊर्जा दक्षता अपग्रेड वित्त प्रदान गर्दछ। ब्यापारिक मालिकहरुसँग उर्जा र पैसा बचाउने अवसर छ उनीहरुको युटिलिटी बिलमा, एकै समयमा वातावरणमा पर्ने उनीहरूको प्रभाव लाई घटाउने। ऊर्जा वाच Programण कार्यक्रम एमएएफ र वातावरण फ्रान्सिस्को विभागको बिच एक सहकार्यात्मक पहल हो।
एक ठाउँमा जहाँ बिक्री कलहरू लगातार हुन्छन् र उच्च आवाजमा हुन्छन्, माइक पहिलो नजरमा सुरक्षात्मक थियो र सूचनालाई फाइल गर्‍यो "सत्य हुन पनि राम्रो छ।" एक बर्ष पछि, तथापि, उनी कार्यक्रममा पुनः प्रस्तुत गरिएको थियो:
“मैले बत्ती जलाउने ठेकेदारलाई भेटें। ऊ नजिकै बस्ने र पसलमा रोकियो र उसले कार्यक्रम ल्यायो। यो दोस्रो पटक हो जब मैले यसको बारेमा सुनेको थिएँ, र म उहाँलाई धेरै प्रश्नहरू गर्न सक्षम थिएँ। उसले मलाई मेरो पीजी एण्ड इ बिलमा कति बचत गर्ने सोचे उसको अनुमान छ, र त्यसले नै मलाई भन्यो: 'ठीक छ, यो कुनै ब्रेनर छैन।'
माइकले आफ्नो पसल उज्यालो पार्न ऊर्जा वाच प्रोग्रामको उपयोग गर्‍यो (केही थप फाइदाका साथ)।
माईकले अर्को बर्षमा दुई अलग प्रकाश अपग्रेडहरू प्राप्त गर्न अगाडि बढ्यो, जम्मा $3,000 को कुल। एनर्जी वाच प्रोग्रामबाट प्राप्त छुट र प्रोत्साहनले उनलाई अर्को वर्षमा १ 1२२ टी १००० को मासिक loanण भुक्तानको साथ १ lower२२११ को लागत घटाउन सक्षम गर्यो। बल्ले ठ्याक्कै लाभहरू देख्न सकिन्छ: उसको पीजी एण्ड इ बिलमा मासिक बचत करीव १ पीटीपी २ टी १०० थप गरियो, मासिक भुक्तानहरू मिल्छ र एक बर्षमा १टीपी २ टी १, २०० को मान।
एक सानो व्यवसाय मालिक को लागी, एक $3,000 पकेट लागत को एक उच्च बाधा हुन सक्छ। माइकले भनेझैं, ऊर्जा बचत गर्नु र “हरियो हुनु” केही हदसम्म एउटा सुअवसर हो। यदि एक व्यवसाय विशेष रूप मा लाभदायक छैन, अग्रिम लागत संग एक ऊर्जा दक्षता परियोजना प्राथमिकता को कम हुन सक्छ। उर्जा वाच कार्यक्रमले सस्तो, लचिलो loanण उत्पादनहरूको साथ यो अवरोध हटाउँछ। माइकका अनुसार:
"यसले तपाइँलाई एक प्रोजेक्ट गर्न अनुमति दिँदछ कि अन्यथा सम्पन्न हुँदैन ... एक व्यवसाय मालिकको रूपमा, त्यहाँ धेरै समय हुन्छ जहाँ कुनै जोखिम र कुनै नकारात्मक पक्षको साथ त्यहाँ केहि छ। यो ब्याज रहित पैसा हो, यसले तपाईको व्यवसायलाई मद्दत गर्दछ, यसले तपाईको मासिक PG&E बिलमा बचत गर्दछ। "
माईकको ऊर्जा दक्षता अपग्रेडको मासिक बचत भन्दा ठूलो प्रभाव थियो।
माइकले वर्णन गरे कि अपग्रेड गर्नु भन्दा पहिले उनका धेरैजसो बत्तीहरू जलाइएको थियो, भाँचिएको थियो, र थोरै र colors्गीन र colors्गहरू थिए जसले स्टोरलाई "रन डाउन" र असंगत लुक दिए। यस प्रकारको प्रकाशको साथ व्यवसाय बन्द हुने क्रममा देखा पर्न सक्छ। माइकले प्रकाश अपग्रेडलाई उसको कहिल्यै बगिरहेको क्यान्डी डिब्बासँग समानको रूपमा वर्णन गरे:
"यो मेरो क्यान्डी डिब्बामा उही चीज हो, म तिनीहरूलाई खाली हेराइमा मनपर्दैन किनकि यसले तपाईंलाई व्यवसायबाट बाहिर जाँदै गरेको जस्तो लाग्छ ..."
अपग्रेड भएदेखि भण्डारको हरेक कुनामा उज्यालो छ र उही समान, सुसंगत, रंग देखिन्छ। जे होस् यो राम्रो विवरण हो, ग्राहकले यसको द्वारा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ।
माइक आफ्नो ऊर्जा सुधार संग सन्तुष्ट छ र परियोजना को उद्देश्य आफ्नो ग्राहकहरु को लागी एक सहज वातावरण बनाउन को लागी आफ्नो प्रतिबद्धता संग जोड।
हाम्रो कुराकानीको बखत, माइक सर्कलहरू आफ्ना ग्राहकहरूप्रति उनको बफादारी र उनीहरूको आनन्दको लागि एक अद्वितीय उत्पादन प्रदान गर्न समर्पणमा फर्कन्छन्।. पसलको हस्ताक्षर सात लेयर्ड बदाम बटर पाई फज यो विशिष्टताको उदाहरण दिन्छ। माइक र उनका स्टाफले के भन्न सक्दछन्, Z. Cioccolato एक मात्र क्यान्डी पसल हो संसारमा यसले सात लेयर्ड फज गर्दछ।
माइकले त्यो अंशलाई विश्वास गर्दछ Z. Cioccolato's भविष्यले भण्डारको खुद्रा अनुभवलाई यस्तै अनौंठो र अविस्मरणीय बनाउँदैछ कि ग्राहकहरू अनलाइनको सट्टा व्यक्ति-भित्रै किनमेल गर्न रुचाउँछन्। पछिल्लो बर्षमा, प्रकाश अपग्रेडहरूले संरक्षण र थप देखिन र अनुमोदन गर्न मद्दत गर्दछ Z. Cioccolato's ग्राहक केन्द्रित, इनडोर वातावरण।
माईक मा आफ्नो काम को लागी एक गहिरो जोश छ Z. Cioccolato र साना व्यवसायहरूलाई कर्पोरेट दिग्गजहरूको साथ प्रतिस्पर्धा गर्ने भार बचाउन सबै खुद्रा अनुभवहरूको बृद्धिको लागि वकालत गर्न जारी रहनेछ। र उसको ग्राहकको रूपमा, हामीसँग उनीहरूले प्रस्ताव गरेको सबै भोग भोग्ने मिठो सुअवसर छ। यदि तपाईंसँग पहिल्यै नै छैन भने, तपाईंको अर्को यात्रा योजना बनाउनुहोस् क्यान्डी शपमा स्टप बनाउन Z. Cioccolato खुल्ला:
474 कोलम्बस Ave
सान फ्रान्सिस्को, CA 13 13१133।